Microsoft PowerPoint - အသုံးဝင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနားလည်သည်။
Posted by ကို Tranquillus | မေလ 16, 2020 | ရုံး
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ, Microsoft PowerPoint သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သေချာပေါက်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးဆလိုက်တင်ဆက်မှုဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌။ သင်၏အမှတ်ကိုသရုပ်ဖော်ရန်ဤလျှောက်လွှာကိုသင်လိုအပ်ပေမည်။ ကောင်းတဲ့တင်ဆက်မှုတစ်ခုထက်ပရိသတ်ကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိနေစေဖို့ဘာမှပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ စာများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသဟဇာတဖြစ်စေသောရောစပ်ခြင်း။ ကျွမ်းကျင်စွာ Microsoft PowerPoint အသုံးပြုခြင်း။ သင်သည်အကြောင်းအရာနှင့်ပုံစံကိုကျွမ်းကျင်စွာတတ်နိုင်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပိုဆောင်းအလေးချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ဖက်ရှင်တွင်မဆိုတင်ပြထားသောအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များသည်မည်သူမဆို၏အာရုံကိုဖမ်းစားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Microsoft PowerPoint ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာအဘယ်နည်း။
သငျသညျ၏တင်ပြချက်များထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကို။ အရာအားလုံး PowerPoint အတွက် "ဆလိုက်" ကိုလှည့်ပတ်လှည့်ပတ်။ ဤသည်မှာစာမျက်နှာတစ်ခုစီသို့မဟုတ်ဆလိုက်တစ်ခုတွင်၎င်းကိုမည်သို့အမည်ပေးရမည်နည်း။ သင်အတူတကွစုစည်းမည့်မာလ်တီမီဒီယာနှင့်စာဖြင့်ရေးသားထားသောအရာအားလုံး။ သင်လိုချင်သောရလဒ်အတိအကျရရန်။ စာရွက်စာတမ်းရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုစီ၏နေရာအသေးစိတ်ကိုသင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Office suite ထဲကအခြား software များလိုပဲ။ ဖဲကြိုးတလျှောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသော tabs များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Microsoft PowerPoint ရှိမတူညီသော tabs များ
၁။ Home tab နဲ့စကြရအောင်။
ဤ tab တွင်သင်ဖြတ်ရန်နှင့်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည့်အရာများပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်ဖောင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏စာပိုဒ်များကိုစီစဉ်ပါ။ သင်၏ဆလိုက်များ၏ layout ကိုစီစဉ်ရန်အသုံးပြုသင့်သော function ကိုဤနေရာတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
ဖတ်ရန် သင့်ရဲ့ Facebook ကိုပရိုဖိုင်းကိုရှင်းလင်း, သင့်ပုံရိပ်ကိုများအတွက်လူမှုကွန်ယက်၏အရေးကြီးပုံကိုနားလည်ပါသည်။
၂။ ထို့နောက်ဘယ်ဘက်သို့ File tab ကိုနှိပ်ပါ။
အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းရွေးချယ်စရာကဒီမှာစုဆောင်းနေကြသည်။ ဖွင့်၊ သိမ်း၊ ပုံနှိပ်၊ ပိတ်၊ ကြွင်းသောအရာ။
၃။ ထို့နောက်အလွန်အရေးကြီးသည့် Insertion tab ကိုဆက်လုပ်ကြပါစို့။
သင်သည်သင်၏ဆလိုက်တစ်ခု element တစ်ခုမိတ်ဆက်ချင်တဲ့အခါ။ insertion tab ကိုနှိပ်ပြီးသင်လိုချင်တာကိုထည့်ပါ။ ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ထို့နောက်သင်၏တင်ဆက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးဝင်သောအရာအားလုံး။
၄။ Creation tab ကိုသွားပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ Creation tab မှာ themes များနှင့် color mode များကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သင်၏ဆလိုက်အတွက်နောက်ခံကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
၅။ Transition tab ကိုဆက်လုပ်ကြပါစို့။
စတိုင်တစ်ခုနှင့်အတူတ ဦး တည်းဆလိုက်ကနေအခြားမှတိုးတက်စေရန်။ အကူးအပြောင်းကိုနှိပ်ပါပြီးနောက်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုအထင်ကြီးအရေအတွက်။ ဂန္ထဝင်အရည်ပျော်မှသည်အော်ဂရီမီစ်အထိ morphosis အထိဖြစ်သည်။
6. တူညီသောသွေးကြောများတွင် Animations tab ကို
ဤကဏ္tabတွင်သင်ပေါင်းစည်းထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုသင်အဆင့်တိုင်းထားရန်လိုအပ်သမျှသည်တည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီ၏အသွင်အပြင်ကိုဆလိုက်တွင် configure လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
၇။ ဖဲကြိုးကိုတက်ပြီးနောက်၊ ဆလိုက်ရှိုး tab ကိုတပြိုင်နက်တည်း
ရုံအမှန်တကယ်တင်ဆက်မှုအတွက်လိုပဲ။ သင်၏ဆလိုက်တစ်ခုချင်းစီ၏အသွင်အပြင်အတိအကျကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်၏တင်ဆက်မှု၏အမြင်အာရုံပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူဆက်လက်, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာရပ်တန့်။
၈။ Revision tab ကိုကြည့်ရအောင်။
ဖတ်ရန် Mypermissions နှင့်အတူမိနစ်၌သင်တို့၏လူမှုရေးကွန်ရက်များသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နဝမအနေအထားမှာတော့ Display ကို tab ကို
ဤတည်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် zoom အဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဆလိုက်၏ပြသမှုအမျိုးအစားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းမျက်နှာဖုံးများအပေါ်ကြားဝင်။ macros များအတွက် dialog ကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၁၀။ နောက်ဆုံးတွင် Format tab ဖြင့်ပြီးဆုံးသွားသည်
သင်သည်သင်၏ဆလိုက်ပေါ်တွင်ခြေလှမ်းသောအခါသင်တည်းဖြတ်တစ်ခုခုကိုကလစ်နှိပ်ပါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင့်အားမတူညီသောသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများပေးသော tab တစ်ခုပေါ်လာမည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်ကိရိယာများသည်ဗွီဒီယို၊ စာသားစသည်ဖြင့်ကွဲပြားသည်။
လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Microsoft PowerPoint ကိုလေ့လာပါ။
PowerPoint တွင် DIY ကိုဖယ်ရှားရန်သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်၏အလုပ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မိန့်ခွန်းများကိုသင်ပြုလုပ်လိုသည်။ ထိုအခါရှင်းလင်းစွာဘေးဖယ်ထား, illegible စားပွဲပေါ်မှာနှင့် inaudible အသံနှင့်အတူတင်ပြချက်များ။ မရှုပ်ပါဘူး ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းသောဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်အနည်းငယ်သာလိုသည်။ သူတို့ကသင့်အား PowerPoint မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုတိတိကျကျနားလည်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ဆလိုက်၏ဖန်တီးမှုအတွက်လုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်တဖြည်းဖြည်းချင်း။ မင်းပေးမယ် ပရိသတ် မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုပ်ခဲ့ဖူးသလိုခံစားရတယ်။ ၁၅ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သင်တစ်ဝက်လောက်မေ့သွားလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီသင့်လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။ သုံးမိနစ်အစည်းအဝေးများ, အနည်းငယ်အလေ့အကျင့်။
PowerPoint သင်ခန်းစာ # 1 | အခြေခံ (+ ကွင်းဆက်တင်ဆက်မှု) - တင်ဆက်နည်းပြုလုပ်နည်း
PowerPoint သင်ခန်းစာ #2| တင်ဆက်မှု၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စည်းကမ်းများ + ပုံတစ်ပုံထည့်သွင်းပါ
PowerPoint သင်ခန်းစာ #3| ဒီဇိုင်းစိတ်ကူး + စမတ်အနုပညာ - အောင်မြင်သောတင်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နည်း
PowerPoint သင်ခန်းစာ #4| ပုံသဏ္+ာန်များကိုထည့်သွင်းပါ
PowerPoint သင်ခန်းစာ #5| ကာတွန်းဖန်တီးရန် - သင်၏ဆလိုက်ရှိုးကိုအသက်သွင်းပါ
PowerPoint သင်ခန်းစာ #6| Slide zoom, အကျဉ်းချုပ်နှင့်အပိုင်း - ဆလိုက်ရှိုးအားမည်သို့အားဖြည့်ပေးရမည်နည်း
#DiapoDePro #2| ခေါင်းစဉ် & လိုဂို + ချဲ့ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (Ft ။ Matthieu Langlade)
PowerPoint သင်ခန်းစာ #7| ပုံမှနောက်ခံကိုဖယ်ရှားပါ
10 PowerPoint အတွက်အမှားများမထားပါနဲ့
PowerPoint တွင် Professional နှင့် Modern CV တစ်ခုပြုလုပ်နည်း အပိုင်း 1/2
PowerPoint သင်ခန်းစာ # 8 | ဆော့ဖ်ဝဲမရှိဘဲသင်၏ pc မျက်နှာပြင်ကိုမည်သို့ရိုက်ရမည်နည်း။
PowerPoint သင်ခန်းစာ #9| ဤအကူးအပြောင်းသည်သင်၏တင်ပြချက်များကို METAMORPHOSE လိမ့်မည်!
PowerPoint သင်ခန်းစာ # 10 | ဆလိုက်မျက်နှာဖုံးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ - အပိုင်း။ 1/2
PowerPoint သင်ခန်းစာ # 11 | သင့်ရဲ့ဆလိုက်မျက်နှာဖုံးများကိုစိတ်ကြိုက်ဘယ်လို - အပိုင်း။ ၂/၂
PowerPoint သင်ခန်းစာ # 12 | Excel ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဇယားများနှင့်ဂရပ်များဖန်တီးပါ
ဖတ်ရန် Windows 10 တွင် Keyboard Shortcut များအပြည့်အစုံ
Microsoft PowerPoint - အသုံးဝင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနားလည်သည်။ မေလ 16th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောWindows 10 တွင် Keyboard Shortcut များအပြည့်အစုံ
အောက်ပါExcel ရှိ Dashboards သည်အမှားအယွင်းမရှိလေ့လာခြင်း။
Windows 10 တွင် Keyboard Shortcut များအပြည့်အစုံ
Excel ကိုသင့်ရဲ့ Productivity သိကောင်းစရာများအပိုင်း-တိုးမြှင်
Excel ရှိ Dashboards သည်အမှားအယွင်းမရှိလေ့လာခြင်း။